अब नेपालमा यस्ताे नयाँ मोटरसाइकल आउदै ! यति सस्तो छ मुल्य ! – Khula kura
अब नेपालमा यस्ताे नयाँ मोटरसाइकल आउदै ! यति सस्तो छ मुल्य !
दशैंको मुखमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएरपनि बिक्री सुरु हुन नसकेका तीन नयाँ मोटरसाइकल तिहारपछि मात्रै नेपाल आउने भएका छन् । विशेषत युवा पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न हिरो, होन्डा र बजाजले नयाँ मोटरसाइकल ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
हिरोको आधिकारीक वितरक एनजीमले नेपाल ल्याउने तयारी गरेको एक्ट्रीम १६० आरले भारतमा निकै राम्रो बिक्री गरिरहेको छ भने होन्डा हर्नेट २.० पनि चर्चामा रहेको छ । स्याकार ट्रेडिङले यसलाई छिट्टै नेपाल ल्याउने जनाएको छ ।
बजाजको आधिकारीक वितरक हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले दशैंमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको डोमिनार २५० सार्वजनिक हुन सकेन । यसको सार्वजनिक मिति केहिपछि धकेलिएको छ ।
बजाजले २५० सीसी सेग्मेन्टमा आउन लागेको यो मोटरसाइकलमा २४८.८ सीसी क्षमताको सिंगल सिलिण्डर, लिक्वीड कुल्ड, डिओएचसी इन्जिन दिइएको छ । उक्त इन्जिनले अधिकतम ८५०० आरपीएममा २७ पीएस पावर र ६५०० आरपीएममा २३.५ एनएम टर्क प्रदान गर्नेछ । यसमा ६ स्पीड म्यानुयल गियरबक्स रहेको छ ।
कम्पनीले तिहारपछि यसलाई बजारमा ल्याउने जनाएको छ । तीन फरक सेग्मेन्टमा आउने यी मोटरसाइकलले नेपाली बजारमा राम्रो व्यापार गर्ने अनुमान गरिएको छ । हिरो एक्स्ट्रीम १६० आरले आरटीआर १६० फोर भी, एफजेड १५० सिरिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
बजाज डोमिनार २५० मा सबै लाइट एलइडी प्रयोग गरिएको छ । सानो विन्डस्कृन, मस्कुलर फ्यूल ट्याङ्क, फुल डिजिटल इन्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको साथमा अर्को सानो डिस्प्ले, इन्जिन कौल, सिग्नेचर एलइडी हेडल्याम्प, ट्वीन व्यरेल एग्जस्ट, अलोय ह्वील, स्प्लीट सिट जस्ता मुख्य फिचर उपलब्ध रहेको छ । यसका साथै यसमा स्लिपर क्लच, डबल च्यानल एबीएस जस्ता फिचर समेत उपलब्ध रहेको छ ।
त्यस्तै हर्नेट २.० ले आरटीआर २००, एनएस २०० जस्ता मोटरसाइकलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने डोमिनार २५० ले यामाहा एफजेड २५ तथा जिक्सर २५० सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
हिरो एक्स्ट्रीम १६० आरमा रहेको १६० सीसी एफआई इन्जिनले ८५०० आरपीएममा १५.२ बीएच पावर र ६५०० आरपीएममा १४ एनएम टर्क प्रदान गर्नेछ ।
त्यस्तै होन्डा हर्नेट २.० मा समान १८४.४ सीसी इन्जिन रहेको । हर्नेट २.०मा प्रयोग गरिएको इन्जिनले १७.२ बीएच पावर तथा १६.१ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यसमा एफआई इन्जिनको प्रयोग गरिएको छ । होन्डा २.० मा यूएसडी फर्क रहेको छ । यो सेग्मेन्ट फर्ष्ट फिचर हो । यो सेग्मेन्टमा उपलब्ध मोटरसाइकल मध्ये सबैभन्दा वाइड टायर पनि यसमा पाउन सकिन्छ ।
यसमा कम्पनीले अटो शेल टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको जनाएको छ । हिरो एक्स्ट्रीम आरमा नयाँ डायमण्ड टाइप सिंगल डाउन ट्युव फ्रेम दिइएको छ ।
यसमा अगाडि ३७ एमएमको एन्टी फिक्सन बुस टेलिस्कोपिक फर्क र पछाडि ७ स्टेप एड्जस्टेवल मोनोशक दिइएको छ । साथै, दुबै चक्कामा पेटल टाइप डिस्क ब्रेक दिइएको छ भने सिंगल च्यानल एबीएस उपलब्ध रहेको छ ।
पाल्पामा पहिरोले ६ घर पुरिँदा एकको मृत्यु, एक बालक समेत बेपत्ता, सात घाइते -कस्तो छ पछिल्लो अवस्था ?
यी सुन्दरअष्ट्रेलियाकि युवतीले नेपाली भाषामा यति रमाईला टिकटक बनाउँछिन् (भिडियो सहित)